I-WOWOW 8 Inch 4 Hole Centerset Bridge Ikhishi ompompi nge-Side Sprayer, i-Bronze Rushed Bronze
Ikhaya / Ikhishi Faucets / I-Bridge Kitchen ompompi / I-WOWOW 8 Inch 4 Hole Centerset Bridge Ikhishi ompompi nge-Side Sprayer, i-Oyili i-Bronze Bronze
Solid Brass Ukwakhiwa - Umpompi webhulokhi osindayo osebenza kanzima wenziwe ngethusi eliqinile le-premium futhi unesisindo esingu-7.76 Ibs. I-Brass ekhishini lompompi wokugoba onomphetho we-nickel oshisiwe ngukugqwala, ukugqwala, ukumelana nokuvuza, futhi kuqinisekisa ukuphepha kwamanzi nempilo ende.
Izibambo ezimbili Zompompi Wekhishi - Ipompo lekhishi lebhuloho lifaka umklamo wesibambo esingu-2 futhi iza namaphayiphu okuhlinzeka (kubanda futhi kuyashisa), okungasiza ukulawula ivolumu yamanzi nokushisa ngokunembile. I-arc ephezulu engu-360 ° ejikelezayo ompompi nayo ilungele ukusika kabili.
I-Brass Side Sprayer ene-Pull-Out Hose - Ngokucindezela inkinobho eyodwa, i-high-pressure brass side sprayer ingafafaza umfudlana onamandla wamanzi ukuhlanza izitsha kanye nokungcola ekhoneni. I-hose efakiwe ingakhishwa ize ifike kumasentimitha angama-59, okwenza kube lula ukuyihlanza noma yikuphi lapho ufuna khona.
Insizakalo yekhasimende - Ikhishi lebhuloho elingu-8 intshi lijabulela ukubuyiselwa okunqunyelwe kwezinsuku ezingama-90 newaranti yeminyaka emihlanu. Uma kukhona umbuzo mayelana nompompi webhuloho lethusi, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi, singajabula kakhulu ukunikeza isixazululo.
Isuselwa ku-ABS Aerator
Umbhobho we-ABS osuswa ngekhwalithi, awekho amathuluzi adingekayo.
Amanzi afana nogwebu, athambile futhi anobuhlobo besikhumba, awushisi, awasha ngokunganaki
Isihlungi semigqa eminingi, ukuhambisa ezempilo, ukonga amanzi ngaphezu kwe-30%
Ukuhlanzwa okuthambile ngeminwe ukususa isikali ne-calcium kalula.
Isiphathi Sesibambo Esimbili
Umpompi ompompi wethusi oyi-2 kukusiza ukulawula ukushisa kwamanzi nokugeleza kwamanzi ngokunembile.
Idizayini eyingqayizivele nebabazekayo, egcwele isitayela se-retro nobuchwepheshe besimanje, ngokungangabazeki izoletha okuvelele okuhehayo ekhishini lakho.
I-Brass Side Sprayer ene-Pull-out Hose
Ngokucindezela inkinobho, isifutho sophusi esinengcindezi ephezulu singafafaza umfudlana onamandla wamanzi ukuhlanza izitsha kanye nokungcola okusekhoneni, kunikeza ithuba elengeziwe lokusebenza kusinki wasekhishini.
I-hose yokukhipha efakiwe ifinyelela kumasentimitha angama-59, kulula ukuhlanza noma isiphi isikhundla esizungeze usinki.
Amantongomane enziwe ngethusi eliqinile, angcono kunezinye izinsimbi.
Akunasidingo sokukhathazeka ngokugqwala, izinkinga zokugqwala.
Akukho mthofu namaminerali akhiqizwayo, avikela impilo yemindeni yakho
Amakhadididi wekhwalithi eshisayo nebandayo yekhwalithi
Yenziwe ngethusi ne-ceramic, inamandla futhi ihlala isikhathi eside ngokuphelele.
Isihlungi esakhelwe ngaphakathi, anti-drip kabili. Ukusabela okusheshayo, akulula ukuguga.
Izikhathi ezingama-50,000 zokuhlolwa kokuvula / ukuvala, akukho ukuvuza noma ukuvuza, kungasetshenziswa iminyaka eminingana.
Umsebenzi oqinile we-Brass Material
Yenziwe ngethusi eliqinile le-premium futhi inesisindo esingu-7.76 Ibs, umsebenzi osindayo noqinile.
I-Brass - ukumelana nokugqwala nokugqwala.
Yinto esezingeni eliphakeme kakhulu esetshenziswa emikhishini nasekhishini lokugeza, elehlisa okuqukethwe okuholayo kwamanzi avela emthonjeni ukuqinisekisa amanzi aphilile.
I-SKU: 23115A1RB Categories: I-Bridge Kitchen ompompi, Ikhishi Faucets Tags: isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu, Amafutha Okugcotshwa Amafutha
Amasentimitha angu-17.5 x 13.2 x 2.6
I-Bronze Ekhuhlulwe Nguwoyela
Isiqinisekiso Seminyaka emihlanu